Baranjely nendasina mikarepoka tsara - Nahandro Malagasy
par Tatiana Razanadraibe	 2 février 2018 Écrire un commentaire
Betsaka ny olona tsy dia tia laotra an’ity baranjely ity. Ito aza misy fomba anakiray mety mba ho tsara iany : Baranjely nendasina mikarepoka tsara.
• Baranjely 1
• Ravina “basilic”
• Fraomazy 150g
• Fraomazy efa voakiky 120g
• Atody 2
• Lafarinina 80g
• « Chapelure » 80g
• Menaka 300ml
• Saosy voatabia 200ml
• Sira sy dipoavatra
Fomba fikarakarana Baranjely nendasina mikarepoka
1. Tetehina boribory ny baranjely dia asiana sira ary avela hipetraka kely aloha.
2. Apetraka eo ambony taratasy mitroka rano no tena mety ary fafana mihitsy rehefa tena hikarakara azy.
3. Tetehina ny « basilic ». Afangaro ny fraomazy sy ny atody iray.
4. Apetraka eo ambonin’ireo baranjely ireo fangaro ireo ka rakofana baranjely eo amboniny. Aorian’izay dia ampidirina ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny ora iray.
5. Araraka ao anaty lovia jobo tsirairay ny lafarinina, ny atody sy ny « chapelure ». Rehefa tena hanendy dia arotsaka tsirairay ao anatin’ireo akora ireo ny baranjely, ka atomboka any amin’ny lafarinina izany.
6. Hafanaina ny menaka ka endasina ny baranjely. Tsy atao may be loatra. Tsihifina eo ambony taratasy mitroka menaka.
Endasina ny baranjely
Nanolotra : Nadine Fanja Hanitiriniala
laoka malagasy, laoka tsotra, laoka tsy misy hena, ny baranjely, receita berinjela
Article précédent : La danse des baleines à bosse au large de l’île de Sainte-Marie Madagascar
Petite histoire du caméléon de MadagascarArticle suivant :